XOG: Ciidamo Itoobiyan ah oo la wareegay Ciidamo & Hub uu lahaa Mukhtaar Roobow(Ogow Sababta) | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA XOG: Ciidamo Itoobiyan ah oo la wareegay Ciidamo & Hub uu lahaa...
XOG: Ciidamo Itoobiyan ah oo la wareegay Ciidamo & Hub uu lahaa Mukhtaar Roobow(Ogow Sababta)
Wararka naga soo gaarayo magaalada Baydhabo ee xarunta KMG ah Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegaya in Ciidamo Itoobiyan ah ay la wareegeen maleeshiyaad daacad u ahaa iyo hub uu lahaa Mukhtaar Roobow Cali Abuu Mansuur oo hadda Dowladda Federaalka u xiran.
Ciidamada Itoobiyan oo aad u hubeysan ayaa xalay u dhacay guri uu Wadaadka ku lahaa magaalada Baydhabo halkaasi oo ay ilaalo ka hayeen Ciidamo lagu qiyaasay ilaa iyo boqol maleeshiyo hubeysani,kuwaasi oo dhammaantood daacad u ah Sheikh Mukhtaar Roobow Cali Abuu Mansuur.
Dad goob joogayaal ah ayaa inoo sheegay in Ciidamada Itoobiya hub badan iyo Ciidamo maleeshiyo ah oo tiradooda lagu qiyaaysay 70-askari horay u kaxeysteen,mana la oga sababta iyo halkey u kaxeysteen.
Wararka qaar ayaa sheegaya in Maleeshiyadan iyo hubkooda ay dooneyso iney Dowladda la wareegto.
Mukhtaar Roobow oo hankiisu ahaa inuu noqdo madaxweynaha Maamulka Koonfur Galbeed waxayna ka soo xirtay magaalada Baydhabo,xarigaasi oo sababay banaanbax ka dhashay dhimasho,dhaawac & dad badan oo xabsiga lagu guray.
Mukhtaar Roobow ayaa heysta maleeshiyo badan iyo hub,kuwaasi oo horay kala soo baxsaday Al-Shabaab.